3 qof Oo Ku Geeriyootay Rabshado Ka Dhacay Dalka Burundi – Goobjoog News
3 qof Oo Ku Geeriyootay Rabshado Ka Dhacay Dalka Burundi
Tuulo u dhow caasimadda wadanka Burundi ayaa waxaa ka dhacay iska horimaad sababay dhimashao , dhanka kale inta uu socday iska horimaadkaan ayaa waxaa la afduubtay xubno ka tirsan mucaaradka wadanka Burundi.
Gakuti oo ah duqa magaalada uu iska horimaadka ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in kooxo hubeysan ay soo weerareen ciidamada wadanka Burundi uuna ka dhashay qasaaro nafeed oo gaaraya dhimashada Saddex qof.
Xaakimka magaalada ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ammaanka ee Burundi ay u suuragashay iney gacanta ku dhigaan kooxihii weerarka soo qaaday.
Dhinaca kale inta uu iska horimaadka socday waxaa la afduubtay xubno ka tirsan Axsaabta mucaaradka ee ka jirta wadankaasi
Arrintaan ayaa imaaneysa kadib markii la dilay wasiirkii deegaanka iyo faydhowrka ee dalkaasi Burundi , wadanka Burundi ayaa ku sugnaa xaalad adag tan iyo Bishii April 2015 oo ah markii ay wadankaasi ay bilowdeen qilaafka dhanka siyaasadda.
Warbixin uu soo saaray Ururka udooda xaquuqda Bini’aadamka bishii November ee sanadkii 2016 ayaa waxaa lagu sheegay in wadanka Burundi dhibaatada ka jirta ay sababtay dhimashada Kun qof halka 310 kun oo kale ay is kaga carareen wadanka.
5 Arrin Oo Maanta Ka Cusub Doorashada Madaxtinnimada Puntland
free adult webcam sex [url=https://theocrostirab.tk]adult we...